Tuchel oo ka jawaabay haddii ay kooxda Chelsea ka niyad-jabtay hanashada horyaalka Premier League – Gool FM
(London) 23 Jan 2022. Tababaraha Jarmalka ah ee Thomas Tuchel ayaa xaqiijiyay inuu diiday inuu sugo waqti dheer si uu ugu guuleysto inuu u beddelo Chelsea mid si dhab ah ugu tartameysa horyaalka Premier League.
Hadalka Tababaraha Jarmalka ah ee Thomas Tuchel ayaa wuxuu imaanayaa kahor kulanka horyaalka Premier League ay caawa ku soo dhaweyn doonaan kooxda Tottenham Hotspur garoonka Stamford Bridge.
Chelsea ayaa adkaatay kaliya 4 kulan 13-kii kulan ee ugu dambeeyay ee horyaalka premier League waxana ay aad uga fogtahay kooxda hogaanka haysa ee Manchester City waxayna u muuqataa inay u furan tahay u dagaalamida inay ka mid noqoto afarta sare.
Haddaba tababare Thomas Tuchel oo ka soo muuqday shir jaraa’id kahor kulanka caawa ee Tottenham Hotspur ayaa wuxuu yiri:
“Laga yaabee, laakiin wax cudur daar ah ma aqbali doono, xitaa naftayda mar walba waan la dagaallami doonaa.”
Ma rumaysni oraahda ah waxaan u baahanahay wakhti si aan u noqono tartamayaasha, runtii, waxaan qabaa inaan awoodno inaan tartan.”
“Waxaan u maleynayaa inaan ognahay waxa aan u baahanahay, waxaan haynaa liis dhaawacyo iyo maqnaansho ah oo ka dhashay Korona Fayras, laakiin waa inaan aaminaa nafteena.”